Chii chinonzi mhosva? | Law & More BV
Blog » Chii chinonzi mhosva?
Chii chinonzi mhosva?
Wakatyora mutemo wekorona uye wakabhadhariswa faindi here? Zvino, kusvika nguva pfupi yadarika, iwe wakamhanya nenjodzi yekuve nerekhodi rematsotsi. Iyo corona faindi inoramba ichiripo, asi hapachina katsamba pachinyorwa chematsotsi. Sei zvinyorwa zvematsotsi zvave munzwa wakadai kudare reImba yeVamiririri uye ivo vakasarudza kubvisa chiyero ichi?
Ukatyora mutemo, unogona kuwana rekodhi remhosva. Rekodhi rematsotsi inonziwo 'kuburitsa zvinyorwa zvematare'. Iko kuongorora kwemhosva dzakanyoreswa muJudicial Documentation System. Musiyano uripo pakati pematsotsi nemhosva wakakosha pano. Kana iwe ukapara mhosva inogara iri pachinyorwa chako chematsotsi. Kana iwe wakanganisa, izvi zvinokwanisika, asi hazvingagare zvakadaro. Kukanganisa idiki diki. Mhosva dzinogona kunyorwa kana vachirangwa nemutongo unodarika EUR 100, kudzingwa kana faindi inodarika EUR 100. Mhosva imhosva dzakakomba, dzakadai sekuba, kuponda nekubata chibharo. Zvikwereti zveCorona zvakare zvirango zvechirango zvinodarika EUR 100. Kusvika parizvino, nokudaro, chinyorwa chakanyorwa mumagwaro ezvekutongwa pakapihwa faindi yekona. Muna Chikunguru, huwandu hwefaindi hwakanga hwapfuura 15 000. Gurukota Grapperhaus vebazi rezvemitemo nekuchengeteka vakasimbirira pane izvi, mushure mekunge iye pachake atambira faindi uye nekudaro chinyorwa chematsotsi chekutadza kutevedzera mutemo wekorona pamuchato wake.
Zvinyorwa zvematsotsi zvinogona kukanganisa zvakanyanya vatadzi. Paunonyorera basa, iyo VOG (Chitupa cheMufambiro Wakanaka) dzimwe nguva inoshandiswa. Ichi chiziviso chinoratidza kuti maitiro ako haaiti kupokana nekuitwa kweimwe basa kana chinzvimbo munzanga. Rekodhi rematsotsi rinogona kureva kuti haugamuchire VOG. Muchiitiko ichocho hauchatenderwa kudzidzira rimwe basa, senge gweta, mudzidzisi kana bailiff. Dzimwe nguva vhiza kana mvumo yekugara inogona kurambwa. Kambani yeinishuwarenzi inogona zvakare kukubvunza kana iwe uine rekodhi yematsotsi paunonyorera inishuwarenzi. Pakadaro unosungirwa kutaura chokwadi. Nekuda kweiyo mhosva rekodhi iwe ungangowana inishuwarenzi.
Kuwana uye kuchengetedza kwedare rematsotsi
Iwe hauzive kana iwe uine chinyorwa chematsotsi? Unogona kuwana rekodhi rako rematsotsi nekutumira tsamba kana e-mail kuJudicial Information Service (Justid). Iyo Justid chikamu cheMinistry yeJustice uye Chengetedzo. Kana iwe ukasabvumirana nezviri pazita rako rematsotsi, unogona kunyorera shanduko. Izvi zvinonzi chikumbiro chekugadzirisa. Ichi chikumbiro chinofanirwa kuendeswa kuFront Office yeJustid. Iwe uchagamuchira sarudzo yakanyorwa pachikumbiro mukati memavhiki mana. Dzimwe nguva dzekuchengetedza dzinoshanda kune yedare redzimhosva remhosva pane zvinyorwa zvematsotsi. Mutemo unotara kuti ruzivo urwu runofanira kugara ruripo kwenguva yakareba sei. Iyi nguva ipfupi pamhosva pane mhosva. Panyaya yesarudzo yematsotsi, semuenzaniso mune iyo faindi yekorona, iyo data ichadzimwa makore mashanu mushure mekubhadharwa kwese kwese
Nekuti chinyorwa chematsotsi chine mhedzisiro yakakura, zvine musoro kubata gweta nekukurumidza kana, semuenzaniso, iwe watambira koronafine kana wapara mhosva. Panogona kuve, muchokwadi, panogona kunge paine imwe nguva yenguva iyo yekupikisa inofanirwa kuiswa kumuchuchisi weruzhinji. Dzimwe nguva zvinogona kutaridza sezviri nyore kungobhadhara faindi kana kutevedzera basa reruzhinji, semuenzaniso mune chisarudzo chematsotsi. Zvakangodaro, zvirinani kuti mamiriro ezvinhu aongororwe negweta. Mushure mezvose, muchuchisi weruzhinji anogona zvakare kukanganisa kana kumisikidza mhosva isiriyo. Pamusoro pezvo, muchuchisi weruzhinji kana mutongi anogona dzimwe nguva kuregerera kupfuura mukuru akamisa faindi kana kunyora mhosva. Gweta rinogona kutarisa kana faindi yacho ichipembedzwa uye inogona kukuzivisa iwe kana iri sarudzo yakanaka yekukwidza nyaya. Gweta rinogona kunyora chiziviso chevanopikisa uye kubatsira mutongi kana zvichidikanwa.
Une mibvunzo here pamusoro penyaya iri pamusoro kana ungade kuziva zvatingaitira iwe? Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kubata magweta pa Law & More kuti uwane rumwe ruzivo. Kunyangwe iwe usina chokwadi kana uchida gweta. Nyanzvi yedu uye magweta ane hunyanzvi mumunda wemutemo wematsotsi achafara kukubatsira.
Previous Post Kudzinga